SAFFRON PEOPLE'S MOVEMENT: လွတ်လပ်ရေးနေ့
၂၀၀၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၄)ရက်နေ့ ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကြီး တိုင်းတစ်ပါး လက်အောက်က လွတ် မြောက် ခဲ့တာ (၆၁)နှစ်ရှိပြီ။ ကျွန်စနစ်ကြီး အောက်ကနေ လွတ်မြောက်အောင် လွတ်လပ်ရေး ခေါင်း ဆောင် တွေရဲ့ အသက် သွေးချွေးပေါင်း မြောက်များစွာ ကျပြီး၊ ရင်းပြီးမှ ရခဲ့ကြတာ အားလုံး အသိ ဖြစ်ပါသည်။ ထိုခေါင်း ဆောင်ကြီးတွေ သူတို့ ရဲ့ သမိုင်းပေး တာဝန်ကို ကျေပွန်စွာ ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြလို့ သူတို့ရဲ့ သမိုင်း မှတ်တမ်းကို သူတစ်ပါး နိုင်ငံကျွန်စနစ် အောက်ကနေ လွတ်မြောက်သောနေ့ လွတ်လပ်ရေးနေ့ လို့ ရဲရဲရင့်ရင့် စိုက်ထူနိုင်ခဲ့
ကြသည်။ သူတို့ရဲ့ သမိုင်း မှတ်တမ်း ကမ္ဘာ့သမိုင်းဝင် သွားခဲ့ပြီ။
ထိုခေါင်းဆောင်ကြီးများ ယူပေးခဲ့တဲ့ လွတ်လပ်ရေးကို ခိုင်မာအောင် မတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့မှု၊ အချင်းချင်း မညီညွတ်မှု၊ အညှိုးအတေးကြီးမှု တွေကြောင့် အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများ ယူပေးခဲ့သော လွတ်လပ်ရေး တဖန် ပြန်လည် ဆုံးရှုံးခဲ့ရ၏။ ရှက်စရာ ကောင်းသည်က ကိုယ့်အချင်းချင်း ကျွန်ပြုထားသော စစ်အာဏာရှင် ကြီးများကား တိုင်းတစ်ပါးသား အင်္ဂလိပ်နှင့် ဖက်စစ်ဂျပန်တို့ ထက်ပင် ပိုမိုဆိုးဝါး နေခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ကျနော်တို့ပြည်သူတွေ တဖန်ပြန်လည် ကျဆုံးနေတဲ့ လွတ်လပ်ရေးကို ဘယ်လိုရအောင် တိုက်ယူကြမှာလဲ? စစ်အာဏာရှင် ဗိုလ်နေဝင်း လက်ထက်မှနေ၍ ယနေ့ ၂၀၀၉ ခုနှစ်ထိ တိုက်ပွဲဝင်လာကြတာ နှစ်ပေါင်း ၄၇နှစ် ရှိပြီ။ ယနေ့ ထိ လွတ်လပ်ရေး မရကြသေး ပေ။
အာဇာနည် ရဟန်း သံဃာတော်တွေ၊ ကျောင်းသားအာဇာနည်တွေ၊ ပြည်သူ့ အာဇာနည်တွေ စသည့် နိုင်ငံ့ အာဇာနည်တွေရဲ့အသက်သွေးချွေးပေါင်း မြောက်များစွာ သွေးမြေကျ ရင်းခဲ့ကြရသည်။ယခုထက်ထိ စစ်အာဏာရှင် န.အ.ဖ ၏အကျဉ်းထောင်များထဲတွင် ထောင်ဒဏ်(၁၀၄)နှစ်၊ (၆၈)နှစ်၊ (၅၈)နှစ်စသည် ဖြင့် နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်တွေ အကျခံ မတရား နှိပ်စက်ခံ နေကြရဆဲရှိသေး၏။ ဒါပေမဲ့ လွတ်လပ်ရေးကား ယ နေ့ထက် ထိ မရရှိသေးသည်ကို တတိုင်းပြည်လုံး အသိဖြစ်၏။ ဒါကို လျစ်လျူရှု မသိကျိုးကျွန် ပြုမနေကြပါနဲ့ ။
တတိုင်းပြည်လုံး လှည်းနေလှေအောင်း မြင်းဇောင်းမကျန် တက်ညီလက်ညီဖြင့် တော်လှန်ခဲ့ကြလို့တိုင်းတပါး သူ့ ကျွန်အောက်ကနေ လွတ်လပ်ရေးကို ရအောင် ယူနိုင်ခဲ့ကြ၏။ ဒါကို ယနေ့ (၆၁)နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ ဆိုတာက အထင်အရှား ဖော်ပြနေပါ၏။ ယနေ့တိုင်းတပါးထက် ဆိုးတဲ့ စစ်အာဏာရှင် ကြီးများ လက်ဝါးကြီးအုပ်ကာ တတိုင်းပြည်လုံးကို ဒုက္ခရောက်အောင် ပြုနေတဲ့ စစ်ကျွန်စနစ် အောက်ကနေ လွတ် မြောက်ရေးကို ဘယ်လိုတိုက်ပြီးရ အောင်ယူကြမှာလဲ? ယနေ့ သမိုင်းပေး တာဝန်သည် မြန်မာနိုင်ငံသား အားလုံး၏ အပေါ်သို့ကျရောက်နေပါပြီ။ တတိုင်းပြည်လုံးရဲ့လွတ်မြောက်ရေးကို ငါနဲ့ မဆိုင်ဆိုပြီး ဘေးထိုင်ဘိုင်ကျ လက်မှိုင်ချ နေမယ်ဆိုရင် သင်ဟာအဆင့် မြင့် လူသားတွေရဲ့စွန့် ပယ်ခြင်းကို ခံရလိမ့်မယ်။ သင်ဟာ လူစင်စစ်ကနေ နိမ့် ကျရွေ့ လျော သွားလိမ့်မယ်။ လူမှာ လူ့ တာဝန် ဝတ္တရားတွေ ရှိတယ်။ ဒီတာဝန် ဝတ္တရားတွေ ကျေပွန်အောင် ထမ်းဆောင်နိုင်မှ သင်ဟာလူပီသတဲ့လူသားစင်စစ် ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဟန်းဖုန်းလေး ခါးကြားချိတ်နိုင်ရုံ၊ ကားကောင်းကောင်းစီးနိုင်ရုံ၊ ပိုက်ဆံလေး သုံးနိုင်ဖြုန်းနိုင်ရုံ၊ န.အ.ဖတွေ ချပေးတဲ့ ရာထူးပါဝါတွေကို သာမက်မောပြီး ငါဟာ ချမ်းသာစည်းစိမ်တွေကို ခံစားနိုင်ပြီ၊ လူပီသပြီလို့ လက်မ ထောင်နေရင် သင့်ကို ကမ္ဘာ့ အချမ်းသာဆုံး ဘီလ်ဂိတ်အိမ်က ခွေးက ရယ်ပြနေလိမ့်မယ်။
သင်တို့ ခံစားနေတဲ့ စည်းစိမ်ချမ်းသာတွေဟာ ဘီလ်ဂိတ်အိမ်က ခွေးတစ်ကောင် လောက်တောင်မှ အဆင့်အတန်းမရှိဘူး။ သင်တို့ ခံစားနေတာတွေဟာ ဘာမှလွတ်လပ်မှုမရှိဘူး။ အမြဲတမ်း စိုးရိမ်နေရတယ်။ အမြဲတန်းဖားနေကြရတယ်။ အဲ့ဒိမိမိဖားနေရတဲ့ အကောင်ကြီးကြီး အမှီးရှည်ရှည် ပြုတ်ပြီဆိုရင် အဲ့ဒီ ငဖား ကောင်လဲ စည်းစိမ်အကုန် ပြုတ်ပြီး ဒုက္ခ ရောက်တော့တာပဲ။ ပြန်စဉ်းစားကြည့်။ ဘီလ်ဂိတ်ရဲ့ ခွေးမှာ ခွေးအခွင့်ရေး အပြည့်အဝရှိတယ်။ သူ့ ကို ဘယ်သူမှ အလကားမငေါက်ရဲဘူး။ မရိုက်ရဲဘူး။ သူ့ မှာဘယ်သူ့ ကိုမှ မဖားရဘူး။ သူ့ မှာ လွတ်လပ်ခွင့်တွေ အများကြီးရှိတယ်။ ပြီးတော့ အဲ့ဒိခွေးရဲ့စည်းစိမ်နဲ့ မိမိစည်းစိမ် ယှဉ်ကြည့် အဲ့ဒီခွေးက သာတယ်။ ဒါကြောင့် စည်းစိမ်ခံစားရရုံမျှကို လူပီသပြီလို့ တွေးကြရင် ဘီလ် ဂိတ်အိမ်က ခွေးကို ပြေးပြီး သတိရဖို့ လိုတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘီလ်ဂိတ်အိမ်က ခွေးစည်းစိမ်ခံစားတတ်ပေမဲ့ ကိုယ့်တိုင်းပြည်ရဲ့လွတ်လပ်ရေးတို့အမျိုးသားရေး တာဝန်တို့ဆို တာကို ဘယ်သိမလဲ။ ဒီတာဝန်ကို လူပီသတဲ့ အဆင့်မြင့် အာဇာနည်တွေသာ သိကြတယ်။ သိသည့်အလျှောက် မိမိအသက်ကိုပင် ပဓာနမထားပဲ လွတ်လပ်ရေးအတွက် တိုက်ပွဲ ဝင်ကြတယ်။ လူနဲ့ တိရ စ္ဆာန် ကွာတာ ခြားနားတာဟာ ဒါပါပဲ။
အဲ့ဒီတော့ မိမိကိုယ်ကို မိမိသေချာစွာ မလိမ်တမ်းမညာတမ်း ပြန်မေးကြပါ။ ငါဟာ ဘယ်အုပ်စုထဲမှာ ပါနေလဲ? လူ့ တိရ စ္ဆာန် အုပ်စုထဲမှာလား? လူပီသတဲ့ လူစင်စစ် အုပ်စုထဲမှာလား? ဒါကို သေချာစွာ မေးပါ။ ဟိုတစ်ချိန်က လုပ်ခဲ့ဘူးတာဘဲဆိုရုံလေးနဲ့စားမြုံ့ပြန်ပြီး ကျေနပ်မနေပါနဲ့ ။ မိမိသွားရမှာက စစ်ကျွန်စနစ်မှ အပြီးတိုင် လွတ်မြောက်ရေးဆီသွားရမယ်။ လွတ်မြောက်ပြီးရင် ဒီလွတ်လပ်ရေးကြီးကို ဘယ်လိုအာဏာရှင်မှ မဖြိုခွဲ နိုင်အောင် လွတ်လပ်ရေး ကြီးမကျဆုံးအောင် မပျောက်ပျက်ရအောင် ခိုင်ခိုင်မာမာ အခြေချ တည်ဆောက်ရမယ်။ ခိုင်ခိုင်မာမာ အခြေမချနိုင်ခဲ့လို့ အသက်သွေးချွေးတွေနဲ့ ရင်းခဲ့ရတဲ့ လွတ်လပ်ရေးကြီး ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်။ ဒါကိုသင်္ခန်းစာ ယူရမယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ပြောခဲ့သလို ပန်းမ၀င်ခင် တက်မထောင်ချင်ကြပါနဲ့ ။ ဒါဟာ သခင်စိတ်ဓာတ်မဟုတ်ဘူး။ ကျွန်စိတ်ဓာတ်သာဖြစ်တယ်။ တတိုင်းပြည်လုံး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့ လက်ထက်ကလို သခင်စိတ်ဓာတ်များ မွေး၍ စစ်ကျွန်စနစ်အောက်က လွတ်မြောက် အောင် တက်ညီလက်ညီ ဖြင့် တိုက်ကြမည်ဆိုလျှင် ဧကန်မုချ လွတ်လပ်ရေး ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
မည်သူ့ ကိုမှ အားကိုးမနေကြပါနဲ့ ။ အတ္တာဟိ အတ္တနော နာထော -မိမိသည်သာမိမိ၏ အားကိုးရာဖြစ်၏ ဆိုတဲ့ ဗုဒ္ဓရဲ့ လမ်းစဉ်အတိုင်း ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး၍ ကြိုးစားကြပါ။
ယနေ့ ပြည်သူအင်အား သန်း(၅၀)ကျော်ရှိပါ၏။ ထိုသန်း(၅၀)ကျော်သာ ညီ ညွတ်ကြမယ်ဆိုရင် တကယ့်မိမိနိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးသည် မဝေးတော့ပါ။ မိမိရဲ့ လက်တစ်ကမ်း အလိုတွင် သာရှိပါသည်။ အားလုံးမိမိရဲ့ ကျွန်စိတ်ကြောက် စိတ်များကို ဖျောက်ကြပါလော့။ စည်းဝေး တိုင်ပင်ကြပါလော့။ သခင်အသင်း များ နေရာအနှံ့ ပြန်လည်ဖွဲ့ စည်းကာ တွန်းလှန်ကြပါလော့။ တကယ် လွတ်မြောက်ရမည် ဟူသော ယုံကြည်စိတ်ဖြင့် တတိုင်းပြည်လုံး ကြိုးစားတွန်းလှန် ကြပါလျှင် န.အ.ဖ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ ခွေးပြေးဝက်ပြေး ထွက်ပြေးရကာ မိမိတို့ တိုင်းပြည်ရဲ့လွတ်လပ်ရေးကို တဖန်ပြန်ယူနိုင် ကြပါလိမ့်မည်။
တာဝန်သိသူ တာဝန်ရှိသည်။ တာဝန်ကို သူတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်းတို့ သာ သိကြသည်။ သိသည့် အတိုင်း